Cod ngetumato kunye nepelepele, isitya esilula nesimnandi | Ukupheka kweKhitshi
Ikhowudi netumato kunye nepepile
UMontse Morote | | Iiresiphi zokupheka
Siza kulungisa ikhowudi netumato kunye nepelepele, iresiphi yentlanzi efanelekileyo yePasika. Nangona ikhowudi ifunyanwa unyaka wonke kwaye ityiwa ngokufanayo, ngePasika ityiwa phantse kuwo onke amakhaya, kufana nesiko.
I-Cod yintlanzi emhlophe enamafutha asezantsi, Ingaphekwa ngeendlela ezininzi, eyona yaziwayo yitumato. Kukho isitya esimnandi esishiyekileyo !!!
Uhlobo lweRipeipe: Pescado
3 iipepile eziluhlaza
150 gr. Utamatisi othosiweyo
Iglasi yewayini emhlophe, i-150 ml.
Ukulungiselela esi sidlo sekhowudi, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukusidibanisa. Ungayithenga sele ichaziwe kwindawo yayo.
Siza kuba nayo emanzini phakathi kweeyure ezingama-24 ukuya kwezingama-48, siya kuwatshintsha amanzi rhoqo kwiiyure ezisi-8.
Xa sinayo, siyayomisa kakuhle ukususa amanzi agqithisileyo ngephepha lasekhitshini.
Sifaka ipani ukuze shushu ngeoyile eyaneleyo, siza kuyidlulisa ikhowudi yomgubo nefry. Siza kuyikhupha kwaye siyigcine.
I-oyile siyayihluza ngokuqhotsa ikhowudi, epanini siyongeza iipunipoyi ezi-6 okanye ezisi-7 zeoyile kwaye siyokroya itswele nepepile esiza kuyisika.
Xa ifakwe kakuhle, yongeza iitumato ezimbini kwaye ushiye malunga nemizuzu emi-5.
Siza kugalela iglasi yewayini kwaye siyivumele ibe ngumphunga.
Emva kwemizuzu embalwa yokongeza iwayini, siza kongeza iziqwenga zekhowudi.
Siza kushiya yonke into kunye imizuzu embalwa ukuze zonke iincasa zidityaniswe, siyishenxise i-casserole kodwa ngaphandle kokuchukumisa ikhowudi, ukuze ingabinamathele kwaye igqunywe ngayo yonke isosi, kwaye malunga nemizuzu emi-5 iya kuba lungile.
Inyani yile yokuba ilungile, kulula ukuyenza kwaye kwimizuzu engama-40 ilungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izihlandlo ezikhethekileyo » Iiresiphi zokupheka » Ikhowudi netumato kunye nepepile
I-spaghetti ene-carrot kunye noshizi
Isonka saseFrance neswekile